Casio Pro Trek WSD-F30: Famaritana, vidiny ary fandefasana | Androidsis
Smartwatches dia mampanantena fa iray amin'ireo vokatra malaza indrindra amin'ny IFA 2018. Ny maodely voalohany nahazoana toerana ambony dia ny Casio Pro Trek WSD-F30. Izy io dia famantaranandro izay ambara ho modely tsara indrindra ho an'ireo mpitsangatsangana. Misaotra izany noho ny endriny mahatohitra sy matevina izay mampanantena ny hahatanteraka ny lahasa rehetra tadiavin'ny mpampiasa amin'ny finday iray.
Ity Casio Pro Trek WSD-F30 ity dia miavaka amin'ny fisian'ny efijery OLED sosona roa sosona ihany koa. Ho fanampin'ny fananana Wear OS ho toy ny rafitra miasa, ary tsy ho ela dia hahazo ny kinova vaovao an'ny rafitra fiasa.
Ity maodely ity dia maneho fivoarana lehibe raha oharina amin'ny taranaka teo aloha. Ny orinasa dia nahatratra famantaranandro mifatotra kokoa, manana habe 4 mm kely kokoa noho ilay maodely teo aloha. Zavatra izay tena ho tsikaritra rehefa mitafy azy, satria tsy dia mavesatra na manelingelina eo amin'ny tanana. Izahay dia mamela anao voalohany amin'ny famaritana an'ity Casio Pro Trek WSD-F30:
efijery: 1,2 mirefy OLED misy sosona roa sosona
bateria: 1,5 andro misy tabilao loko / 1 volana miaraka amin'ny lamba mainty sy fotsy
Sela Mpandray Hafanana: haingam-pandeha, gyroscope, kompà andriamby, tsindry ary haavony
lafiny: 60.5 x 53.8 x 14.9 mm
lanja: 83 grama
fanoherana: IP68, MIL-STD-810, hatrany ambany -10ºC
Miatrika modely iray tena feno izahay, izay Mampanantena ihany koa izy fa ho mahatohitra amin'ny karazana toe-javatra rehetra. Azontsika atao ny mahita fa tsy misy rano izy io, manana mari-pahaizana miaramila ary mahavita mahatanty maripana ambany. Noho izany dia mety amin'ny ririnina ihany koa ny resaka fanatanjahan-tena.
Raha te hividy an'ity Casio Pro Trek WSD-F30 ity dia tsy maintsy miandry hatramin'ny Janoary 2019 isika. Ny vidiny eo amin'ny tsena eropeana dia 549 euro. Izy io dia azo amidy amin'ny loko isan-karazany, izay ahitantsika manga, volomboasary na mainty. Na dia antenaina aza ny fisian'ny fitambarana maro kokoa, na dia mbola tsy naseho aza izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Casio Pro Trek WSD-F30: ny famantaranandro ho an'ny fialamboly
Fahaleovan-tena kely, ilaina ihany ny famahana ny famantaranandro, azon'izy ireo esorina amin'ny masoandro, mety hahomby kokoa izy io ary miaraka amin'ny 10 bar ny halaliny, tsy maharesy lahatra ahy izany
Motorola Moto One: ny Android voalohany an'ny marika